UMaimane uthi yilokhu okubenza behluke kune-ANC | News24
Cape Town – Umholi weDemocratic Alliance uMmusi Maimane uthi izinkinga ezisematheni ngemeya yaseKapa uPatricia De Lille ziveza ngokusobala ukuthi iDA yehluke kangakanani kune-ANC.
UMaimane uthe wonke amalungu eDA kumele aphendule eqenjini ngendlela efanayo.
Ithi okwenzakalayo kuyakhombisa ukuthi akekho ovikelwayo kwi-DA, akekho ongathinteki.
UMaimane uthe inhlalonhle yezakhamuzi zaseKapa ibaluleke kakhuli kwiDA, ikakhulukazi ngalesi sikhathi sesomiso, futhi babhekene nakho ukukhathazeka okukhona ngobuholi bukaDe Lille.
UMaimane uthe ubuholi beDA baqala ukuzwa ngezinkinga zesigungu seDA edolobheni iKapa ngo-Agasti 2017, ngesikhathi kuvela izinsolo ezibucayi ngobuholi obungebuhle, ukungaphathi ngendlela efanele kukaDe Lille nezinye izikhulu.
“Saphendula ngokusungula uphenyo lwangaphakathi ngezinkinga, olwaluholwa uJohn Steenhuisen,” esho.
UMaimane uthi umbiko wophenyo lokuqala wathola ukuthi nakuba uDe Lille esebenza ngokuzikhandla, amanye amakhansela e-DA, yizisebenzi zedolobha bakuthola kunzima ukusebenzisana naye.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe oabesilisa abane ngokuzam aukubulala 'owebe iselula'
Uthi kunezinsolo eziningi anukwa ngazo kanti neqembu lamnikeza isikhathi esanele ukuba aphendule ngazo.
UMaimane uthi olunye uphenyo olwenziwa yiBowman Gilfillan lwaveza ukuthi uDe Lille unokungaziphathi ngendlela efanele.
UMaimane uthi kunabanye abathi iDA akumele izixake kakhulu ngodaba lukaDe Lille njengoba kusahlasele izinkinga zesimiso kuleli dolobha.
Kodwa yena uthi ngeke bazishaya indiva izinsolo ezibucayi ngenxa yalesi sizathu, ngoba isomiso singase sibekhona iminyaka, kanti futhi abantu baseKapa bayabudinga ubuholi obuphethe ngendlela, ikakhulumazi ngalesi sikhathi sezinkinga.
UMaimane uthi ukubhekana nezinsolo ezikhona ngoDe Lille yikhona okubenza behluke kune-ANC, ngoba iDA izimisele ngokwenza into efanele ngaso sonke isikhathi.